हिम्मत जुटाउ शिक्षा मन्त्री, सैक्षिक माफियालाई कारबाही गर – Complete Nepali News Portal
हिम्मत जुटाउ शिक्षा मन्त्री, सैक्षिक माफियालाई कारबाही गर
ScotNepal April 8, 2018
घरमा श्रीमान श्रीमतीको झगडा हुँदा सडकको बाटो छेकेर अधिकारको आन्दोलन गर्ने हामी नेपाली जनता । बाटोमा कुखुरा मर्दा आन्दोलन गरिन्छ , क्षतीपुर्ती दे भन्दै नारा लगाइन्छ । हो , हामीमा धेरै राजनैतीक चेतना छ त्यो पनि अर्थ न बर्थ को । तर बिडम्बन दिनहु अभिभाबक लुटिदा सैक्षिक माफियालाई कारबाही गर भन्ने हुती हुँदैन । समाजबाद र बिकासको नारा लगाउने त्यो राजनैतीक हुलले शिक्षा र स्वास्थ्य बिकासको मेरुदण्ड हो भन्ने किन बुझ्न सक्दैन । जब सम्म शिक्षा राष्ट्रको अधिनमा हुँदैन तब सम्म मानब श्रोतको पलायन रोक्न सकिदैन ।
मानब श्रोत बिना के बिकास सम्भब छ ? माफिया बाट नै पालित पोशित राजनैतीक नेत्रित्वले शिक्षाको ब्यापार रोक्न सक्दैन , यो सत्य हो । कांग्रेसको आवरण र सम्रक्षणमा सैक्षिक माफियाले खुलेर लुट्छन अनी सबैले थाहा पाउछन तर यहाँ कम्युनिष्ट भन्नेहरुले भित्र भित्र शिक्षालाई लुट्ने थलोको रुपमा बिकास गरे । शिक्षा मन्त्रालयमा कम्युनिष्ट कै नेत्रित्व छ तर किन कारबाही हुन सक्दैन माफियालाई ? खुलेर लुट्ने भन्दा लुकेर लुट्ने बाट धेरै खतरा हुन्छ । कम्युनिष्ट आवरणमा हुर्केका सैक्षिक माफियाबाट नै देशलाई घाटा छ । माफियाका बिद्यालय माथि कारबाही सिफारिस भएको फाइल बिचमा रोकिन्छ , किन ? भ्रस्टको जमात धेरै भो , नागरिक दवाब कम भो ।
हिम्मत जुटाउ शिक्षा मन्त्री , केही गरेर देखाउ । मनलाग्दी शुल्क लिने निजि विद्यालय संचालकहरुलाई २४ घण्टा भित्र कारबाही गर्छु भन्ने हिम्मत हुँदैन शिक्षा मन्त्रीलाई । अनी यस्ता शिक्षा मन्त्रीले समाजबाद ल्याउछन रे ? शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार राज्यले ग्यारेण्टी गर्नु पर्दछ । शिक्षाको ब्यापार र नाङ्लोमा राखेर गुट्खा बेचिने ब्यापार एउटै होइन । देशको कुना काप्च्चामा हुर्केका बालबालिकालाई समाजबादी शिक्षा भनेर झोला बोकाउने पार्टी कै शिक्षा मन्त्री हुँदा पनि सैक्षिक माफियालाई कारबाही हुँदैन भने , अब सिद्दान्तलाई माहाकाली नदीमा बगाए हुन्छ ।
के गरीबले गुणस्तरीय शिक्षा नपाउने ? शिक्षा मन्त्री ज्यु , तपाईंको पार्टी बर्ग बिहिन समाजको कल्पना गर्दछ । अहिलेको सैक्षिक ब्यापारले स्पस्ट दुई सैक्षिक बर्गको निर्माण गर्दैछ , के तपाईं बर्गिय शिक्षाकै पक्षमा हो ?
अलौकिक नारा बोक्नेहरुले आत्मसमर्पण गर्छन् भन्थे , साच्चै यो देशका समाजबादी नेता भनौदाहरुले माफिया सँग आत्मसमर्पण गर्दै आफ्नो लगानी पनि सुरक्षित गरिसके । बामपन्थीहरु खाम पन्थी भएका त होइनन ?
शिक्षामन्त्री बाट आमुल परिवर्तन सम्भब छैन किनकी माफियाको कारबाही हुन नै सकेन । माफियाको रातो कार्पेटमा सवार समाजबादको कल्पना गर्ने नेता गणहरुले शिक्षामा परिवर्तन गर्छन् भन्नु नै सपना हो ।